ओमकार टाइम्स सर्वोच्चमा फुलकोर्ट बस्यो, आफैंले बनाएको ‘गोलाप्रथा प्रणाली’ बारे न्यायाधीशहरू नै अलमलमा ! - OMKARTIMES
सर्वोच्चमा फुलकोर्ट बस्यो, आफैंले बनाएको ‘गोलाप्रथा प्रणाली’ बारे न्यायाधीशहरू नै अलमलमा !
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूको सक्रियतामा आज फुलकोर्ट बसेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा आज सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भए पनि फुलकोर्टमा प्रत्यक्ष सहभागी भएनन् ।
यसअघि गत बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू फुलकोर्ट बसेर पेसी व्यवस्थापन गोलाप्रथाबाट गर्ने निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णयलाई प्रधानन्यायाधीशले सदर गरेपछि त्यसबमोजिम सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा संशोधन गरिएको छ । तर, उक्त संशोधनमा न्यायाधीशहरु आफैं अल्मलिएपछि आजको बैठक यही विषयमा केन्द्रित हुनेछ ।
पछिल्लो निर्णयअनुसार सर्वोच्चमा पेसी तोक्ने काम प्रधानन्यायाधीशले एकल रूपमा नभएर पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिले गर्ने छ । उक्त समितिको अध्यक्षता भने प्रधानन्यायाधीशले नै गर्ने छन् ।
प्रधानन्यायाधीशले समितिको अध्यक्षता गर्ने गरी भएको नियमावली संशोधनमा अहिले न्यायधीसहरु आफैं अल्मलिएको स्रोतले बताएको छ । प्रधानन्यायाधीशसँग बेञ्च सेयर नगर्ने निर्णय गरेका उनीहरु समितिमा बस्ने कि नबस्ने दोधारमा छन् ।
स्वास्थ्य अवस्थाका कारण केही दिन यता अदालतमा अनुपस्थित रहेका प्रधानन्यायाधीश राणा आज भने सर्वोच्च गएका थिए । यद्यपि, उनी फुलकोर्टमा सहभागी भएनन् ।